नेकियाको स्मार्ट फोन बजारमा
२०७४ श्रावण १० मंगलबार
विर्तामोड । विश्व विख्यात मोबाइल कम्पनीे नोकियाले आफ्नो पछिल्लो उत्पादन एन्ड्रोइड स्मार्टका तीन मोडलहरु बजारमा ल्याएको छ ।
बजारमा आएका तीन मोडलमा Nokia -3, Nokia-5 , Nokia -6 रहेका छन । मेची अञ्चलको झापा, ईलाम, ताप्लेजुङ, पाँचथर लगायत बिभिन्न जिल्लालाई लक्षित गरि उक्त मोबाईल बिर्तामोडको हनुमान कम्लेक्समा अवस्थित श्री विन्दवासिनी अभिनन्दनलाई विक्रेता तोकिएको पारामाउण्ट इलोक्ट्रोनिक्स् प्रा. लि. विर्तामोडका स्थानीय सेल्स मेनेजर बलराम लामिछानेले बताउनुभयो ।
सो मोबाइलमा ल्यपष्ब Nokia -3 मुल्य १५ हजार ६ सय ५०, Nokia-5 को मुल्य २१ हजार ३ सय ५० र Nokia -6 को मुल्य २५ हजार ६ सय रहेको छ ।
Nokia -3 मा २ जीवी र्याम र १६ जीवी इन्टरनल मेमोरी रहेको छ भने Nokia-6 ३ जीवी र्याम र ३२ जीवी इन्टरनल मेमोरी रहेको छ । यसैगरि Nokia -5 मा फिंगर सेन्सर र तीनवटै मोडलमा अगाडी ८ मेगापिक्सल र पछाडी क्रमस ८, १३ र १६ मेगापिक्सल क्यामेरा उपलब्ध रहेको छ ।
Nokia-3 मा ५ इन्चको आइपीएस स्क्रिन रहेको छ भने यस्मा २ सय ५६ जीवी सम्मको मेमोरी कार्ड थप गर्न सकिने छ भने Nokia-5 मा ५.२ र Nokia-6 मा ५.५ इन्चको आइपीएस स्क्रिन रहेको छ । यी मोबाइलमा पनि २ सय ५६ जीवी सम्मको मेमोरी कार्ड थप गर्न सकिने बजार व्यवस्थापक लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
श्री विन्दवासिनी अभिनन्दनका बजार प्रतिनिधि नरेन्द्र फुयालले तीनवटै मोडलका मोबाइलको विक्री वितरण शुरु भएको र उपभोक्ताहरुको अत्यधिक रोजाइमा पर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।